17 / 02 / 2019 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Febraayo 17, 2019
UK oo digniin ka soo qaaday garoonka diyaaradaha ee Istanbul.
Gegada Diyaaradaha ee Magaalada Istanbul ayaa la ogeysiiyay baaritaanada ay sameeyeen Hay'adda Duulista Rayidka ee Ingiriiska. Sida ku xusan wararka ka soo baxayo AirportHaber, 18 Febraayo Isniinta Ingiriiska oo ku saabsan xaaladda ugu dambeysay ee garoonka diyaaradaha Istanbul ayaa la baari doonaa. Ka walaacsan [More ...]
Xarunta Badbaadinta Dekedda Sare
Dowladda Hoose ee Magaalada Denizli, oo iyadu magac u sameysata maalgashiga ay ku sameyso qeybta tikniyoolajiyadda, ayaa Denizli ka daawaneysa adduunka iyadoo leh kaamirooyinkeeda magaalada lagu meeleeyay barta 13 ee magaalada. Laga bilaabo Denizli Cable Car iyo Bağbaşı Plateau ilaa Denizli Ski Center [More ...]
Qaar ka mid ah Masuulka Gölcük Yüzbaşılar
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay wadaysaa mashaariic muhiim ah si ay u sameyso halbowleyaasha waaweyn ee magaalada. Wajahadan dhexdeeda, howlaha isgoysyada cusub waxaa lagu fuliyaa D-100 iyo D-130 wadooyinkana waxaa loo sameeyay transit. Metropolitan ka shaqeeya D-130 [More ...]
Qoob-ka-cayaarida Dhimashada baabuurta taraamka
Laba qof oo ku cayaaraya geerida qadka tareenka, oo ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee gaadiidka dadweynaha ee caasimadda England ee London, ayaa ku fadhiyay ajandaha waddanka. London gudaheeda, fiidiyowyada maskaxda ku dhufta ee saaran gaariga waa [More ...]
Warar gaar ah - Hyundai Rotem 231, oo ah qandaraaska ugu wanaagsan ee qandaraaska Shirkadda Polish Warsaw Tramway Company oo ay maamusho Dawladda Hoose ee Warsaw, ayaa ku guuleysatay bixinta gawaarida dabaqa hoose. koonfurta [More ...]
Isgaadhsiinta Köseköy Bridge ayaa la furay
Degmada Kocaeli Magaalo weyn, Xarunta degmada Kartepe iyo wadada Istanbul-Ankara ee gaadiidka gaadiidka ah ee gaadiidka ah ee wadada Köseköy ayaa loo furay gaadiidka. Waxay siin doontaa fursad aan kala go 'lahayn D-100, oo si weyn u naaqusa shabakada gaadiidka. [More ...]
Turkey ayaa ugu weyn skeidgareeyo Park Bostanlı
Izmir degmada Metropolitan adeegyada dib-u-naqshadaynta ay bixiyaan xeebaha Bostanlı, "park Turkey ugu weyn skeidgareeyo" iyo "Badda iyo Bandhigyada Space" waxaa loogu tala galay caado dadka dhalinyarada ah mustaqbalka. Ku dhawaad ​​40 milyan ginni [More ...]
Maanta taariikhda: 17 Febraayo 1934 Cali Cetinkaya Ku-simaha Nafia ...
Maanta taariikhda 17 Febraayo 1923 dhaqaalaha Istanbuul waxay go'aansatey in ay bilowdo waxqabadyada dhismaha ee tareenka ee barnaamijka. 17 Febraayo 1934 Cali Cetinkaya wuxuu noqonayaa ku-xigeenka Nafia. A jiido jidka tareenada.